I-CRUX 3.6: Uhlobo olusha lwe-CRUX luyatholakala, i-Distro elula futhi elula | Kusuka kuLinux
I-CRUX 3.6: Uhlobo olusha olutholakalayo lwe-CRUX, i-Distro elula futhi elula
Namuhla sizohlola okuthakazelisayo futhi okuwusizo Ukusatshalaliswa Kwamahhala Kwesoftware okuyinto ebonakala ngokukhanya, okulula nokusetshenziswa okukhethekile kwabasebenzisi abanolwazi ku- Izinhlelo zokusebenza I-Linux yamahhala futhi evulekile, futhi igama likabani I-CRUX.
Futhi konke lokhu, sisebenzisa iqiniso lokuthi ikhiphe i- Inguqulo ye-3.6 kulezi zinsuku zakamuva zikaDisemba zonyaka okhona, osuvele uphela.
I-Systemd iqhathaniswa neSysvinit. Futhi i-Systemd-shim?
Ngaphambi kokungena ngokugcwele, kufayela le- I-Distro CRUX nezindaba zenguqulo yayo entsha, kuhle ukukucacisa lokho I-CRUX Kuyinto a Distro ngaphandle kweSystemd, okwenza ihehe ikakhulukazi kwabaningi, ngoba kunamaphesenti amakhulu we I-Linuxeros ngokuvamile bathanda I-GNU / Linux Distros ngezinye izindlela ezingashiwo "Izinhlelo ze-Kernel Boot" (Init), okungukuthi, I-Systemd.
Uma kwenzeka, ufuna ukwazi okunye Distro ngaphandle kweSystemd, sincoma ekugcineni kokufunda le ncwadi, iya kokungenayo okulandelayo okuhlobene nalesi sihloko:
Futhi uma kwenzeka ufuna ukwazi okwengeziwe ngokuthi kungani abanye abasebenzisi befuna ezinye izindlela ze-Distros nge-Systemd, ungavakashela okulandelayo okuhlobene okuhlobene nalesi sihloko:
"ISystemd okwamanje iyisilinganiso esisetshenziswa kakhulu maqondana ne- "Kernel Boot Systems" (Init) engatholwa ezindaweni ze-Unix, njengeLinux. Yakhiwa eminyakeni embalwa eyedlule nguLennart Poettering (ikakhulukazi) noKay Sievers (owayekade eyiRed Hat). Njengamanje inelayisense ye-LGPL 2.1 (ngaphandle kokuthola ilayisense ngaphansi kwe-GPL2). Yize kunezinye izindlela, njengamasiko amadala iSysVinit ne-Upstart, kunezinye izindlela ezintsha lapho njengeSystemd-shim."
1 ICRUX 3.6: Uhlobo olusha luyatholakala kusuka ngomhlaka 09/12/2020
1.1 I-CRUX: I-Distro elula futhi elula
1.2 Yini okusha kunguqulo 3.6
ICRUX 3.6: Uhlobo olusha luyatholakala kusuka ngomhlaka 09/12/2020
I-CRUX: I-Distro elula futhi elula
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni we I-Distro CRUX, ichazwa njenge:
"I-CRUX ukusatshalaliswa kwe-Linux engasindi okwakhiwa kwe-x86-64 okuhloselwe abasebenzisi be-Linux abanolwazi. Okugxilwe kakhulu kulokhu kusatshalaliswa ukukugcina kulula, okuvela ohlelweni lwephakeji olususelwa kufomethi ye-tar.gz, imibhalo yokuqalisa yesitayela se-BSD, kanye neqoqo elincane kakhulu lamaphakeji asikiwe. Ukugxila kwakho kwesibili kusebenzisa izici ezintsha ze-Linux, amathuluzi nemitapo yolwazi yakamuva. I-CRUX futhi inohlelo lwembobo olwenza kube lula ukufaka nokuvuselela izinhlelo zokusebenza."
Yini okusha kunguqulo 3.6
Ngokusho kwefayela lakhe Khipha Amanothi, ezinye zezici ezintsha yilezi:
Ukuvuselelwa kwamathuluzi: Iza ne-Toolchain ye-multilib efaka i-glibc 2.32, gcc 10.2.0 kanye ne-binutils 2.35.1.
I-Core (Kernel)I-Linux 5.4.80 (LTS)
Xorg Iphasela: I-Xorg 7.7 ne-Xorg-server 1.20.9
ISO Image: Icutshungulwe nge-Isohybrid, eyenza ukuthi ibe yinhle futhi ilungele ukushiselwa kwi-CD / DVD futhi iyisebenzise kwi-USB drive. Ngokwengeziwe, ukusekelwa kwayo kwe-UEFI kuyatholakala ngesikhathi sokufakwa ngama-dosfstools, efibootmgr, ne-grub2-efi / syslinux etholakala ngesikhathi sokufakwa. Okokugcina, ifaka wonke ama-bootloaders ngaphandle kwe-lilo, engasafakwa njengechweba le-kernel elizenzakalelayo. Ngenkathi, ukunikeza ithuba lokukhetha i-boot loader inemenyu entsha yokumisa.
Izinguquko ezingahambelani: Imitapo yolwazi ebalulekile ibuyekezelwe kuzinguqulo ezintsha ezinkulu ezingahambelani nezinguqulo ezindala. Kungakho-ke, abathuthukisi bayo beluleka ngokuqinile ukuthi bangavuseleli ngokwenza i-CRUX 3.6 ngamachweba, ngoba lezi zinguquko zizokwephula uhlelo okwesikhashana.
Okwalabo abafuna ukwazi kabanzi nge I-Distro CRUX, kungakuhle ukuthi ufunde isigaba sabo sewebhu se- "Mayelana" kanye nalo "Wiki".
NoteIzinsuku ngemuva kokukhishwa kwenguqulo 3.6, inguqulo ye-bugfix (ICRUX 3.6.1) elungisa i-bug eyodwa engabaluleki ngesikhathi sokuthuthuka. Ngaphezu kwalokho, abathuthukisi benza iphuzu lokuthi uma sebevele befake inguqulo 3.6, akukho ukufakwa kabusha okudingekayo, ukuvuselelwa kuphela.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana ne-okuthiwa yi-Distro «CRUX», ezithakazelisayo neziwusizo Ukusatshalaliswa Kwamahhala Kwesoftware okuyinto ebonakala ngokukhanya, okulula nokusetshenziswa okukhethekile kwabasebenzisi abanolwazi ku- Izinhlelo zokusebenza I-Linux yamahhala futhi evulekile; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-CRUX 3.6: Uhlobo olusha olutholakalayo lwe-CRUX, i-Distro elula futhi elula
Isibonelo, bakhohlwa i-runit. Akuyona yonke into i-systemd vs sysv, futhi isigqoko esibomvu siyentengiselwano, i-linux ene-systemd inguqulo ye-beta yesigqoko esibomvu (akunandaba ukuthi bathi ubuntu bekufanele i-fedora noma yini) futhi ifunde kulokho okwenzekile ngamasenti ...
Ngiyabingelela, Tani. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Futhi ekungeneni kwangaphambilini okucashunwe okubizwa nge- "Systemd vs.Sysvinit. Futhi i-Systemd-shim? » sisho uRunit nabanye.
Akukhulumi ngezidingo eziphansi noma ezinconyiwe.
Sanibonani, ArtEze. Zisencwadini yabo ye-inthanethi, ungachofoza kusixhumanisi esilandelayo: https://crux.nu/Main/Handbook3-6#ntoc10
I-Fluent Reader, isifundi esihle kakhulu se-RSS reader
I-GTK 4.0 iza nokuthuthuka kokwenza i-graphical interface, ukudluliswa kwedatha nokuningi